Ukuhamba Konke nge-Bangkok Express Express Boats kanye namaFeri
Izimoto nama-ferries yindlela elula futhi ethakazelisayo yokuzungeze i-Bangkok, futhi nakuba ingasabisa ekuqaleni, uma uthola imizila nemithetho elula kakhulu ukuyisebenzisa.
I-Bangkok inezinhlelo ezimbili zezikebhe: i-Chao Phraya isikebhe sesitimela kanye nesistimu yomngcwabo wamanzi. Umkhumbi womfula uqhutshwa yi-Chao Phraya Express Boat Company, okushicilela isheduli kanye nemephu kwiwebhusayithi yabo, kodwa ayikho imephu ye-canal ferry noma isimiso esitholakalayo ku-intanethi.
Kukhona isikebhe sokuvakasha esivela eSaphan Thaksin Sky Train ukuya e-Phra Athit eduze ne- Khao San Road . Isikebhe sezokuvakasha siyeka kuphela ukuhamba ngezindawo ezikhangayo ezinkulu eziseduze futhi kukhona ummemezeli obika lolu hambo. Izikebhe zokuvakasha ziyabiza kakhulu kodwa nazo zigcwele kakhulu kunezikebhe zokuhamba.
Ulwazi olubalulekile mayelana nokuhamba kwemikhumbi
Izikebhe ezinqoleni zaseBangkok ziveza noma zendawo futhi zihamba ngaphakathi ngaphakathi kwedolobha noma ngaphesheya kwalo, futhi amaflegi ahlukahlukene avumela abagibeli bazi ukuthi yisiphi isikebhe abagibelayo.
Emfuleni weChao Phraya, isikebhe sokugcina emgwaqweni ngamunye sizolanda ifulegi elimnyama elibonisa ukuthi isevisi yokuhamba ngesikebhe isiphelile usuku. Izikebhe eziningi zigijima kusukela ngo-5 ekuseni kuya ku-7 ntambama bese zigijimela ngokushesha njengoba imizuzu engu-10 ngezikhathi eziphakeme futhi zihamba kancane njengehora ngezikhathi eziphuthumayo, kodwa azikho izikebhe zasebusuku e-Bankok.
Izikebhe ze-canal, ezibizwa nangokuthi i-khlong boke, zigijima emanzini amakhulu ase Bangkok.
Umzila owuthandwa kakhulu yiSan Saeb umkhumbi, ongena ePetchaburi Road kuze kube seGold Mount. Izikebhe zamakhansela kanye nezikebhe zomfula zenza ngokushesha kakhulu ngakho akusikho isikhathi esiningi sokuvula nokuvala. Hambisa ngokushesha futhi ulandele ukuhola kwabantu abaseduze nawe!
Uhambo oluningi emfuleni noma emanzini angasemngcwabeni abiza ama-baht angaphansi kuka-30.
Umqoqo wokuthenga uzofika kuwe ukuze akuthengise ithikithi. Umfula kanye nomkhumbi we-canal uyayeka kahle. Umkhumbi we-canal uyayeka kunzima ukuwuthola ngoba imigodi ayisobala njalo emgwaqweni.
Ukuthatha Abavakatjhi Amabhuloho eBangkok
Uma ngabe uthanda ukufunda okwengeziwe ngomlando weBangkok futhi wazi idolobha lapho uhamba khona kodwa ungacabangi ukuchitha kancane kancane emkhunjini wakho, izikebhe zezokuvakasha zaseBangkok ziyindlela enhle yokuhamba ngenkathi efundiswa ngedolobha.
I-Chao Phraya Tourist Boat, eqhutshwa yi-Chao Phraya Express Boat Company, ingenye yezintandokazi kulezi zinsuku edolobheni, ukunikeza uhambo oluqondisiwe lugibela emfuleni weChoa Phraya phakathi kweSaphan Thaksin Sky Train noFra Athit.
Lezi zikebhe zihamba ngamafulegi aluhlaza futhi zimise eziningi zamapayipi amakhulu emfuleni, zikwazi ukuhamba ngokushesha phakathi kwezivakashi ezinkulu ezifana ne-Wat Arun, Ratchawongse, noTha Maharaj. Kumelwe uthenge ithikithi elilodwa futhi ungagcina futhi uvale noma yikuphi umkhumbi we-blue-flag ngokuletha i-One-Day River Pass.
Izindlela Ezinine Zokugubha uKhisimusi eBangkok
I-Scam ecacile kakhulu ngocansi emhlabeni
Isiqondiso se-Isan Food eThailand
I-Erawan e-Erawan yase-Bangkok: Umhlahlandlela ophelele
Umkhosi WamaKhotho WamaKhotho - Isiko LamaKhotho WaseRoyal eBangkok, eThailand
Imisebenzi eyi-10 yamahhala e-Bangkok
Ngeke Uze Ufinyelele Kwanele Lezi Ziphuzo Ezinhle E-Southeast Asia
Ama-movie angama-10 ahlukumezayo ahlungwa ku-Vancouver, BC
It'z Isikhungo Sokuzijabulisa Komndeni e-Albuquerque
Indlela Yokuthola Ukusuka Seattle kuya eGlacier National Park
Umhlahlandlela Weziqhingi ZaseNingizimu Pacific
Izindawo zokuhlala ezihamba phambili ze-Adult-Only All Inclusive eLos Cabos
Gubha uKhisimusi eBulgaria
Ukuphi Ukunikela Amathoyizi KaKhisimusi eMinneapolis-St. UPawulu
Manje Sekunzima Ukuhamba Ngebhayisikili Yasezintabeni eScotland
St. Peter Line Cruise: I-No-Russian-Visa Way yokuvakashela eSt. Petersburg
Amakethe Aphezulu Ayishumi E-Delhi Nalokho Ongayithenga
Izindawo ezingcono kakhulu zomculo obukhoma e-Austin